Global Voices teny Malagasy » Nasandratra Ho Andriamanitra, Avy Eo Tsy Izy Intsony: Miverina Amin’ny Andavanandrom-Piainana Ilay ‘Kumari’ Nandritry ny Sivy Taona Tao Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Novambra 2017 4:16 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Teratany, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Ilay Kumari, “andriamanibavy velona”. Sary an'ny Green Peace Co-ed School, nahazoana alàlana
Ilay tovovavy Matina Shakya no Kumari, andriamanibavy velona tao Kathmandou, renivohitr'i Népal , Nandritra ny sivy taona. Ankehitriny, niverina an-tsekoly izy , izay efa nataony rahateo talophan'ny nanandratana azy ary tsy maintsy hiaina ny fiainana andavanandron'ny ankizivavy iray mpianatra, toy ny hafa rehetra
Ny fametrahan'ny ao Nepal ny Kumari Devi dia mifàka lalina ao anatin'ny kolontsain'ny lemak'i Kathmandou. Na ny topimaso avy aminy aza dia heverina fa mitondra soa.
Tamin'ny 2008, teo amin'ny fahatelo taonany  i Matina no nofidiana tao anatin'ny foko bodista Shakya ho toy ny endrika ara-nofon'i Taleju, ilay andriamanibavy hindoa. Dingana henjana ny fifantenana, tarihan'ireo pretra sy mpandinika ny kintana nandritry ny taonjato maro. Avy eo i Matina dia niankohofana ho toy ny Kumari, na andriamanibavy velona [fr] , mandrapandehan'ny fadimbolany voalohany, fotoana inoana fa hoe ialàn'ilay andriamanibavy tsy ho ao amin'ny vatan'ilay tovovavy.
Araka ny angano Nepaley iray , nahazatra an'i Jaya Prakash Malla, ilay mpanjaka Malla tao Kathmandou (fianakaviana mpanjaka tamin'ny taonjato faha-12 hatramin'ny faha-17), ny milalao kodihakely niaraka tamin'ny andriamanivabavy Taleju. Indray andro, nanaraka azy ny vadin'ny mpanjaka ary nahita an'ilay andriamanibavy, izay nandràra ny mpanjaka tsy hiteny na amin'iza na amin'iza momba ny fihaonan'izy ireo. Tezitra i Taleju ka nampitandrina ny mpanjaka hoe raha te-hahita azy indray izy na hiantoka ny fiarovana ny fanjakàny, dia tsy maintsy mikaroka ny fitsanganany ho velona any anatinà ankizivavy kely iray ao anatin'ny foko Shakya. Tao anatin'ny fanantenany hampitony ilay andriamanibavy, nandeha nitady izay ankizivavy kely manana ireo toetoetran'i Taleju ny mpanjaka, ary io fomba io no mbola tohizana hatramin'izao.
Tao anatin'ireo Kumari marobe voatendry tany amin'ireo tanàna nepaley maro samihafa mba hiaro azy ireny amin'ny ratsy, ireo Kumaris telo tao amin'ny lemak'i Kathmandou (tao an-tanànan'i Kathmandou, Patan ary Bhaktapur) no tena niankohofana indrindra sy voahaja indrindra. Ny Kumari ao Kathmandou, fidiana ao anatin'ny foko Newar Shakya, no tena manana fahefana miohatra amin'ny rehetra.
Mandeha an-tsekoly ilay Kumari teo aloha. Sary an'ny Green Peace Co-ed School, nahazoana alàlana.
Manoratra i Pramod Bhattarai sy Bijay Shrestha  fa mba ho voafidy ho andriamanibavy Kumari ny ankizivavikely iray dia tsy maintsy mitoetra ao anatiny ireo “toetra roa amby telopolo tonga lafatra”: 
Omena antsipirihany ny mason-tsivana : tsy maintsy salama tsara tsy manana tantaranà aretina henjana, manana hoditra tsy misy pentina, volo mainty, maso fitaratry ny fo, feo mambabo, tànana sandry marotsaka, tànana sy tongotra manana hoditra malefaka, volo malefaka miforitra mankany amin'ny ilany havanana, tsy misy fofona hafahafa ny vatana, tsy mbola very rà hatrizay. Ny mason-tsivana lehibe indrindra dia hoe tsy mbola nandeha fandimbolana velively ilay zazavavy… Ny laza maha-mpivavaka ny fianakaviany koa dia raisin'ilay komity mpifantina ao anaty fandinihana, komity mitily ao amin'ilay ankizivavy ny fisian'ny fahatoniana sy ny tsy fahasarotin-tahotra. Mba hiantohana hoe mifanaraka tsara amin'ny mpanjaka lahin'i Nepal izy, dia ampitahaina ny tononandron'izy ireo ary tsy maintsy mifanaraka, satria ilay Kumari dia manana anjara asa lehibe manoloana ny mpanjaka lahy, izay ny fahefany nentin-drazany no manamafy ny fanjakany.
Ankizivavy kely lasa andriamanibavy, hatraiza no sandany?
Misy sandany ny fiovàna tampoka miala amin'ny maha-ankizivavy kely ho lasa andriamanibavy iankohofana. Tsy maintsy mitoka-monina izy, lavitra ny fianakaviany sy ny namana, mitoetra ho tony amin'ny fotoana rehetra ary mifehy tena tsy haneho fihetsehampo na inona na inona. Lanjaina ny andriamanibavy velona mba tsy hikasika amin'ny tany ireo tongony masina ; mena mandrakariva no tafiany, fatorana mivona ny volony ary lokoina ho toy ny “maso afo” ny eo amin'ny handriny mba ho mariky ny fahefany manana fahaiza-mitsinjo. Na tsy natao handray baiko aza izy, misy andraikitra ara-pomba tsy maintsy tanterahany ary ny fanatrehany dia mameno ireo rehetra izay manao asa fanompoana sy fiankohofana aminy.
Sarotra ny fiverenana amin'ny fiainam-piarahamonina “andavanandro”. Tohizan'ny fiarahamonina ny manaja sy miankohoka amin'ilay tovovavy na eo aza ny “fiverenany” ho amin'ny fiainana maha-olombelona. Tsy maintsy iainany ihany koa ilay finoana hoe na iza na iza manambady Kumari dia ho faty afaka volana enina taorian'ny fampakarana.
Ilay Kumari fahiny, Rashmila Shakya, nanoratra ny tantaram-piainany “Tsy Andriamanitra Intsony Fa Nofo Sy Rà Mety Maty: ny Tena Tantaram-Piainan'ny Kumari Mpanjaka Fahiny ”, dia niezaka nanova ny fomba fijerin'ny sarambabem-bahoaka sy nanentana ny olona hijery ny tena zavamisy iainana rehefa lasa andriamanibavy. Soritan'i R. Shakya ny tsy fahampian'ny fanabeazana an'ireo Kumari ary faritany ireo fahasarotana amin'ny fiverenana any an-tsekoly raha tsy manana ny fahalalàna ilaina mba hahombiazana.
Ilay Kumari teo aloha, ao an-dakilasiny. Sary an'ny Green Peace Co-ed School, nahazoana alàlana
Andriamanibavy, avy eo ankizivavy mpianatra.
Matina Shakya, ilay Kumari vao haingana indrindra, dia nahazo fampianarana manokana tao Kumari Ghar, toerana fonenan'ny andriamanibavy velona, mandra-piveriny indray ho any an-tsekoly “Green Peace Co-Ed School” ho toy ny ankizy mpianatra tsotra. Manazava ny talen'ny sampana zokiny, Surendra Sthapit :
Nahazo fampianarana manokana tao Kumari Ghar ny Devi Mata (Kumari). Mankany amin'ny toeram-ponenany ny iray amin'ireo mpampianatray ary mampianatra azy ny taranja rehetra.
Ilay mpaka sary fanao an-gazety, Sunil Sharma, manoratra hoe : 
Mianatra amin'ny kilasy fahafito (cinquième) i Matina amin'izao fotoana izao ao amin'ny sekoly “Green Peace Co-Ed School” ao Ganabahal. Ary satria tsy mifindra toerana izy raha tsy lanjaina sy anaty kalesy mandritra ireo taona voalohany maha-Kumari, miaraka amin'ny rainy mitaingina ‘scooter’ izy rehefa mandeha an-tsekoly. Noeritreretin'ny rehetra fa ho sarotra ho azy ny hifandrindra amin'ny fiainam-piarahamonina aorian'ny fiverenany amin'ny fiainana andavanandro. Na izany aza, noporofoiny fa diso izy ireny, herinandro latsaka taorian'ny niverenany an-tsekoly.
Araka ny lazain'i Sthapit, Matina Shakya dia tovovavy kely marani-tsaina izay tafiditra tsara mihitsy anaty fiarahamonina , na teo aza ny zavanisy rehetra.
Raha mbola mizatra miaina ho toy ny ankizivavy mpianatra ‘toy ny rehetra’ sy hiaina indray any an-tokantranony i Matina Shakya, efa voatendry ho Kumari vaovao ao Kathmandou  ilay ankizivavy kely Trishna Shakya, eo amin'ny fahatelo taonany.
Nentina any amin'ny Kumari Ghar androany i Trishna Shakya ilay andriamanibavy velona vaovao #Kumari ao Kathmandou. Telo taona izy. Izy no mandimby an'i Matina Shakya, roambinifolo taona, Kumari hatramin'ny 2008.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/15/110567/
 niverina an-tsekoly izy: http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/15/c_136680595.htm
 teo amin'ny fahatelo taonany: https://shadmia.wordpress.com/2008/10/10/the-new-kumari-matina-shakya/
 Kumari, na andriamanibavy velona [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Kumari_(d%C3%A9esse)
 Araka ny angano Nepaley iray: http://ecs.com.np/features/kumari-a-tradition-of-power-pageantry-and-beauty
 Lanjaina : http://edtimes.in/2017/10/deity-to-mortal-the-struggles-of-ex-kumaris-living-goddesses/
 Tsy Andriamanitra Intsony Fa Nofo Sy Rà Mety Maty: ny Tena Tantaram-Piainan'ny Kumari Mpanjaka Fahiny: http://ecs.com.np/page-turner/from-goddess-to-mortal-the-true-life-story-of-a-former-royal-kumari
 Citation d'origine: https://fr.globalvoices.org/2017/11/14/218153/#original-tab-2
 Sunil Sharma, manoratra hoe :: http://www.sadrishya.com/leisure/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%9b%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%ab%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%9b%e0%a5%87/
 izay tafiditra tsara mihitsy anaty fiarahamonina: http://www.sadrishya.com/leisure/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%BF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87/
 efa voatendry ho Kumari vaovao ao Kathmandou: http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2017-09-27/3-yr-old-trishna-shakya-picked-as-kathmandus-new-kumari.html